अन्तर्राष्ट्रिय::Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
‘आज हामी कसका विरुद्ध लड्न गइरहेका छौं,’ गौरी लन्केशकी पत्रकार मित्रहरूलाई फोन गर्थिन् र सोध्थिन्– ‘तपाईंको सिकायत कोसँग हो ?’ गौरी विशेष गरी आफ्ना सम्पादकसँग सोध्थिन्, ‘अखबारले ती मुद्दालाई सशक्त ढंगले कहिले पनि उठाएन, जुन मुद्दा उनको हृदयले चाहेको थियो । यदि प्रभावशाली व्यक्तिले ठोस कदम उठाउँदैन भने हामी ती काम कसरी सम्भव बनाउन सक्छौं ? गौरी एउटा निर्भीक आवाज थियो, जसलाई सधैंका लागि दबाइयो । दक्षिण भारतको बंगलोरमा गौरी बसोबास गर्थिन्, त्यहीँ आफ्नो नामबाटै एक साप्ताहिक ट्योबलोइड निकाल्थिन् । पत्रिका कन्नड भाषामा निस्कन्थ्यो, जुन उनको पिताको विरासतबाट प्राप्त भएको हो । पत्रिका पाठकको चन्दाबाट चलेको थियो, कर्नाटकको संस्कृतिमा आधारित…
म्यानमारमा समय–समयमा जातीय दंगा भइरहन्छ । गत चैतमा यस्तै अर्को एउटा दंगा भड्किएको थियो । त्यसबेला ४० जनाले ज्यान गुमाए । पछिल्लो पटक नौजना प्रहरी अधिकृतको हत्याबाट सुरु भएको दंगाले उग्ररूप लियो । सयभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ भने लाखौं बंगलादेशको शरणमा पुगेका छन् । म्यानमारको सहर नाइपिदवादेखि एक सय ३० किलोमिटर उत्तरमा पर्ने मैकतिला सहरमा हिंसा सुरु भएको थियो । मैकतिला सहरमा एक सुन पसलमा चलेको वादविवादबाट सुरु भएको त्यो हिंसाले उग्ररूप लिएपछि दंगामा रूपान्तरण भएको हो । सो…
मानिसले शताब्दीदेखि नै अमरत्वको बुटी खोजी गरिरहेको छ, यद्यपि अमरत्वको बुटी अहिलेसम्म हात परेको छैन । अमरत्वको बुटी नभेटिए पनि दीर्घजीवनको बरदान सबै चाहन्छन् । यहाँ ती पाँच देशको चर्चा गर्न खोजिएको छ, जहाँ संसारका अन्य मुलुकमा रहेका मानिसको औसत आयुभन्दा बढी छ । आममानिसको औसत आयु ७१ वर्ष हो । यी पाँच देशका नागरिक आममानिसको औसत आयुभन्दा बढी बाँच्छन् । यसको राज के हो ? सन् २०१७ मा विश्व प्रशन्नताको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको थियो । दीर्घजीवन बाँच्ने ती देशका…
दोस्रो विश्वयुद्धका बेला जापानी पनडुब्बीको चपेटामा परेर डुबेको ठूलो जहाज युएसएस इन्डियानापोलिस ७२ वर्षपछि प्रशान्त महासागरमा भेटिएको छ । यो युद्धपोत १८ हजार फिट (पाँच दशमलव पाँच किलोमिटर समुद्रको फेदमा भेटिएको थियो । इन्डियानापोलिस आफ्नो गोप्य मिसनबाट फर्कदै गर्दा नष्ट गरिएको थियो । उसको गोप्य मिसन परमाणु बम ओसार–पसार गर्नु थियो । भनिन्छ, जापानको हिरोसिमामा प्रयोग भएको परमाणु बम पु¥याएर फर्कदै गर्दा उक्त जहाजलाई नष्ट गरिएको थियो । त्यसबेला जहाजमा ११ सय ९६ जना थिए । तीमध्ये तीन सय १६…
केही मानिस कतारलाई फारसीको ‘बिग्रेको सन्तान’ उपमा दिन्छन् । यतिसम्म कि विगत १५० वर्षदेखि कतारमा शासन गरिरहेको अल थानी खानदानलाई ‘छिमेकीको अप्ठ्यारो परिवार’ उपमा दिने मान्छेहरू पनि भेटिन्छन् । छिमेकीसँगको कूटनीतिक सम्बन्धले कतार यतिबेला विवादमा छ । साउदी अरब, बहराइन र इजिप्टको कतारसँग केही गुनासा छन् । त्यही गुनासालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै अहिले उनीहरूले कतारसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन् । ती मुलुकहरूले कतारमाथि चरमपन्थी गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिएको आरोप लगाएका छन् । कतारले ती आरोपको अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ ।…
कतार राजनीतिक संकटको तार सिधै इरान र साउदी अरबसँग जोडिएको छ । साउदी अरबले कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्ने कदम त्यहाँका अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानीको विवादास्पद टिप्पणीको आधारमा उठाएको हो, जसअनुसार इरानको पक्ष लिएको कतारमाथि आरोप छ । गत बुधबार इरानको संसद र अयातुल्लाह खुमिनीको निवासमा हमला भयो । आक्रमणमा १२ जनाको ज्यान गयो । तीन आक्रमणकारी मारिए । आक्रमणको जिम्मेवारी सुन्नी चरमपन्थी संगठन आइएसले लियो । यद्यपि इरानको रेबुसनरी गार्डले उक्त हमला साउदी अरब र अमेरिकीको मिलेमतोमा…
डिएनए डिटेक्टिभको सहयोगमा ६१ वर्षअघि सिनेमा हलको बाथरुममा छोडिएका एक व्यक्तिले हालै आफन्त भेटेका छन् । अन्ततः यो डिएनए डिटेक्टिभ हो कि ? यसले कसरी काम गर्छ ? जुलिया बेलले भिक्टोरिया डर्बीसायर कार्यक्रममा भनिन्, ‘म यसलाई यसरी व्याख्या गर्छु, कुनै मान्छेको सम्बन्धको रहस्य खोल्न सक्छु, यम कसैको रहस्य खोल्न केही समय लाग्छ । जुलिया ती व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्छिन्, जसको ठाउँ ठेगाना, नातागोतासँग साइनो सम्बन्ध छैन । वर्षौंअघि ऊ बिछोडिएको थियो र अहिले आफ्ना नातेदार खोज्दैछ । हालै जुलियाले रोबर्ट वेस्टनलाई…
यो रेशममार्ग हो कि चीनको बढ्दो प्रभाव
झन्डै हजार वर्षअघि पृथ्वीको पूर्वी र पश्चिमको भागलाई जोड्न यस्तो बाटो बनाइएको थियो, सुरुमा जसको प्रयोग आर्थिक गतिविधिका लागि भयो । तर कालान्तरमा त्यो बाटो संसारका केही नयाँ देश बन्ने र केहीको अस्तित्व मेट्नका लागि प्रयोग भयो । संसार अहिले पनि त्यो बाटोलाई रेशममार्ग भनेर चिन्छ । इतिहासकारहरू त्यसलाई केवल एउटा बाटो मात्रै मान्दैनन्, त्यसमा प्रशस्त सहायक बाटो पनि निकालिएको मान्दछन् । यदि रेशममार्गको कुरा गर्ने हो भने इतिहासमा त्यसलाई सिल्क रोड भनियो । त्यो बाटो एउटा नदीजस्तै थियो, जसले…
ज्याकलिनको भारत यात्रा
ज्याकलिन क्यानेडीले सन् १९६२ मा भारतको यात्रा गरेकी थिइन् । उनी अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ क्यानेडीका पत्नी हुन् । उनको भारत यात्रा निजी थियो, त्यसैले उनी अमेरिकी एयरलाइन्सको सट्टा एयर इन्डियाबाट भारत आएकी थिइन् । उनले रोमबाट एयर इन्डियाको फ्लाइट समातेकी थिइन् । उनीसँग बहिनी राजकुमारी लि ¥यदजिविल र अर्का एक नातेदार भारत आएका थिए । भारत आउनुभन्दा अगाडि उनीहरू पोपलाई भेट्न भेटिकनसिटी पुगेका थिए । लि यो कुरामा केही रिसाएकी थिइन् । सम्बन्ध विच्छेद भइसकेकाले लिले पोपलाई भेट्न चाहेकी…
कुनै पनि जीवको सन्तान वृद्धिका लागि यौन आवश्यक प्रक्रिया हो । संसारमा प्रकृतिले जति किसिमका जीव सृष्टि गरेका छन्, त्यसमा शारीरिक सम्पर्कको विधि पनि त्यति नै किसिमका छन् । सामान्यतः भाले र पोथीको यौन सम्पर्कबाट सन्तान जन्मन्छन् । तर संसारकै बुद्धिमानी प्राणी अर्थात् मान्छे जो सन्तान उत्पादनका लागि मात्र यौन सम्पर्क राख्दैन । यौनका बारेमा मानिसबीचको चासोका कारण धेरै हुनसक्छन् । मानिसहरूबीच विभिन्न किसिमको सम्बन्ध विकासका लागि पनि यौन सम्पर्कलाई आवश्यक ठानिन्छ । त्यसो त हाम्रो समाजले होमोसेक्सुअलिटीलाई पनि मान्यता…